Shina · Febroary, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Shina · Febroary, 2012
Tantara mikasika ny Shina tamin'ny Febroary, 2012
Hong Kong (Shina) 25 Febroary 2012
Shina: Mitohy Ny Fifidianana Ao Wukan Ary Mampangetaheta
Fanoherana 20 Febroary 2012
Haingana be ny fikisahan'i Wukan tamin'ny fizorany ho any aminà fifidianana tsy mitanila sy mangarahara, nahatonga aingam-panahy ho an'ireo vohitra sasany tao amin'ny firenena no sady nahazo ny fanohanan'ireo mpampiasa bilaogy kiritika hatrany an-dalantsaran'ny anjerimanontolo. Na izany aza, raha kely indrindra dia iray amin'ireo mpiasa ambony ao amin'ny governemanta foibe no nanakiana ny fivoarana demaokratika avy aminà fikorontanan-tsaina.
Hong Kong (Shina) 18 Febroary 2012
Niakatrakatra ny fifanenjanana teo amin'i Hong Kong sy i Shina tanibe tao anatin'ny volana vitsivitsy izay. Raha maharomotra ny gidragidra madinika, tahaka ny rombo tanaty fiaran-dalamby, dia niteraka sahotaka sy fahatezerana teo amin'ny mponin'i Hong Kong ny nanasoniavan'ny fitondrana ao Hong Kong sy ny fitondrana ao Guangdong tsy nisy fakana ny hevitry...
Fisamborana sy faneriterena 13 Febroary 2012
Fitsipika 12 Febroary 2012
Any Shina, eo ambany fiahian'ny Antoko Kaominista Sinoa (CCP) mivantana avokoa ireo fitaovana media mahazatra rehetra. Misy mpitan-tsoratry ny CCP dia napetraka isaky ny fikambanana media mba hanara-maso ny votoaty sy hanome ny zotra arahana ho an'ireo mpamoaka sy mpitatitra momba ny zavatra mila asongadina sy sivanina
Syria 11 Febroary 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 09 Febroary 2012
Fomba ahoana no hahazoana antoka fa hoe ny aterineto dia mivoatra mankany amin'ny làlana iray hifanindran-dàlana amin'ny demaokrasia? Ary ahoana no fomba hahatonga antsika ho "mpiondana aterineto" mandray andraikitra ho an'ny hoaviny ara-dizitaly? Io no lahahevitra nofinidin'i Rebecca McKinnon ho an'ny boky vaovao nosoratany: "Fifaneken'ireo mpifandrohy: Ady Erantany ho an'ny Fahalalahan'ny Aterineto."
Hong Kong, Shina: Noesoesoin'ny Mpiserasera ny Oniversiten'i Hong Kong
Hong Kong (Shina) 08 Febroary 2012
Noforonin'ny mpisera iray indray ny fangon'ny "University of Hong Kong" handrabirabiana ny fahazato taonany tamin'ny herintaona, nampifanarahana fa hitontona amin'ny fandalovan'ny premier Li Keqiang tao Hong Kong.
Mongolia: Tsy Misy Zavamiaina Tavela Aorian'ny Fitrandrahana
Azia Afovoany sy Kaokazy 06 Febroary 2012
Mampanantena ny tetikasa fitrandrahana maro ao Mongolia fa hampandroso ny foto-drafitrasa ara-tsosialy sy ara-toekarana ao an-toerana ary hoentina hiadiana amin'ny fahantrana koa izany, saingy rehefa nandeha ny fotoana, dia mahatsiaro ireo vondrom-bahoaka eny amin'ny faritra akaiky ny toby fitrandrahana fa misy fiantraikany ratsy eo amin'ny tontolo iainanany sy ny fomba fivelomana...